March 30, 2019 – ရှအေလငျး
ကူးတို့မော်တော်ပေါ်မှ ..သားမိနှစ်ဦး ..ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း.. ခုန်ချမှုဖြစ်ပွား
သင်္ကြန်မှာ ….ကဲဖို့ အားခဲထားသူတွေ …ကျိန်းသေ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ပို့ပါ.. တွေ့ရင် အပြတ်သိမ်းမည်
ထီအုပ်ရေ ….၆ သိန်းခွဲခန့် …မရောင်းရ၊ မရောင်းရထဲက… ဆုမဲထွက်ပါက . . .
အကယ်ဒမီနဲ့….လွဲသွားပေမယ့် …မိတ်ဆွေအစစ်တွေ ရလိုက်တဲ့…. အေးသောင်း
ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်….ကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းသူထံမှ… လက်ဝတ်ရတနာနှင့်ဖုန်းအား …ဓါးထောက်လုယက်ထွက်ပြေးသူ ….အမျိုးသား(၃) ဦးဖမ်းမိ
ဘွဲ့ရပြီး ….၄နှစ်လုံး အလုပ်ရှာတာ… မရခဲ့ပေမယ့် …ကိုယ်ပိုင်မှိုလုပ်ငန်းလေးဖြင့်… အောင်မြင်သွားသူ
ကင်းမြီး​ကောက်​ …ကင်း​ခြေများ ကိုက်​ခံရလျှင်​ …အမြန်​ဆုံးနှင့်​အလွယ်​ဆုံး ….အဆိပ်​​ဖြေနည်းများ
၉ ထပ်ကြီး….ဘုရားနာမှာ… တွေ့ခဲ့တဲ့ မြေးလေးကို…ဆေးကုချင်လို့ဆိုတဲ့ အဘွား…
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ….အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် …ပတ်သက်၍ ..သိထားရမည့် …အချက်များ
တူရကီမှာ …အမျိုးသားတစ်ဦး ….ထီး လေမလွင့်အောင် …ထိန်းကိုင်ရာကနေ… လေထဲ ၁၃ ပေအထိ…. မြောက်ပါသွား ( ရုပ်၊သံ )
မိသားစုတွေကို တည့်တည့်မှန်တဲ့ ကျည်ဆန် :(
လှိုင်သာယာမှာ ကယ်ရီသမားတစ်ဦးအား လူ(၅)ဦးမှ ဓါးဖြင့် ၀ိုင်းထိုးသတ်
“Food Box မှာ စားစရာတွေထည့်ပေးထားတဲ့ Mama Myanmar”